A Piece of Nyein | BE SIMPLE , SWEET & SMART !
မင်းရဲ့မြို့လေးမှာ အလျှံတညီးညီး သာနေတဲ့ လရောင် အကြောင်း ဒီ့ထက်ပိုပြီး ငါမဆွေးနွေးပါရစေနဲ့ ။ ငါ နားထောင်ခဲ့သမျှ ၊ ပြောဖူးသမျှက မုန်းလောက်အောင် လုံလောက်ပြီးခဲ့ပြီ။ အဲဒီ့ လရောင်ရဲ့ ခိုးကြောင်ခိုးဝှက် ပိုင်ဆိုင်မှုတွေအကြောင်း ဝင်ပြီးအထုတ်ဖြည် ပြရလောက်အောင်တော့ ငါသတ္တိမရှိဘူးဆိုတာ ရှင်းမပြပါရစေနဲ့တော့ကွယ် ။ ဒါပေမဲ့ …. အဖြူ ၊ အမည်း မသဲကွဲတဲ့ မျက်ကန်းတက်ကြွသူတစ်ယောက်ကို ငါပြောင်ပြောင်တင်းတင်း ကန့်ကွက်တယ်။
မင်းအတွက် လရောင်ဟာ မှန်တစ်ချပ်ဆိုရင် မင်းမြင်သမျှ လရိပ်ဟာ အမှန်ချည်းပဲပေါ့။ ဒါနဲ့များ ငါက မင်းထုတ်ပြီးသားအဖြေကို ပုစ္ဆာလုပ်ပြီး ဝိုင်းတွက်ချက်ပေးရဦးမတဲ့လားကွယ်။ မြေပုံမှတ်တိုင်ထူပြီးသား သင်္ချီုင်းရာပေါ်မှာ ငိုကြွေးသလိုမျိုး ၊ သွားလေသူအတွက်အသုံးမဝင်တော့တဲ့ နည်းလမ်းနဲ့ပေါ့။ နှစ်မြို့ချင်စရာ မကောင်းတော့တဲ့အထိ ရောက်အောင်တော့လည်း ငါ့ရဲ့သွေးကို ကြောင်တောင်တောင် ဖြစ်ခွင့်မပေးပါနဲ့ကွယ်။
ခိုပြာတွေ ၊ လေရူးတွေကြား ငါတို့ ဖြတ်လျှောက်ဖူးခဲ့ပြီပဲ ။ သေခြင်းတရားထက် အခံရခက်တဲ့အရာဟာ သိက္ခာကျခြင်းဆိုတဲ့အကြောင်း သိသင့်တာထက် ငါတို့ပိုသိကြတယ်။ အခုနေအခါမှာ “မင်းအာရုံကို လငပုတ်ဖမ်းထားပြီ” လို့ အပြန်အလှန် တံခါးပိတ် ၊ ခြံစည်းရိုး ခတ်မိအောင် ငါကများ စွပ်စွဲသင့်လို့လား ။ ငါကြားသမျှ မင်းနဲ့ပတ်သတ်တာတွေဟာ ပြန်ထွက်လမ်းမရှိဘဲ ၊ ငါ့ရင်ထဲမှာပဲ မွန်းကြပ်ပိတ်လှောင်နေရပြီ ။ ဒီတစ်ကြိမ်တော့ဖြင့် … မင်းဖမ်းဆုပ်လိုက်တဲ့ ယုံကြည်မှုနဲ့ ငါစွဲကိုင်ထားတဲ့ လိပ်ပြာကြား ရေခဲမြစ်တွေ တိမ်မယောင်နဲ့ နက်ခဲ့ပေါ့ ။
တစ်ကမ္ဘာလုံး ဆူညံပေါက်ကွဲနေတာထက် ငါတို့ကြားက အသံတိတ်နံရံတွေက ပိုဆိုးရွားကျယ်လောင်ဦးမလား ။ပုဂ္ဂိုလ်ရေးမေးခွန်းတွေကို ဦးစားမပေးသင့်တဲ့အကြောင်း ငါတို့မေ့ချင်ယောင်ဆောင်မိမှာလည်း စိုးတယ်။ ငြိမ်းချမ်းရေးအရောင်းအဝယ်တွေ တိုက်စားလာတဲ့ မြစ်ကြမ်းပြင်မှာ မင်းရေးနေတဲ့ သံလွင်ခက်နဲ့ချိုးဖြူငှက်ကလေးအကြောင်းထဲ ယမ်းနံ့နဲ့ကြက်ခြေတံဆိပ် ခပ်နှိပ်မထားတာတော့ သေချာပေါက်ဂုဏ်ယူတယ်။ ဒါပေမဲ့ … မင်းကို သူတို့ပြောပြတဲ့ ရပ်တည်ချက်အစစ်အမှန်တွေကြားမှာ ကိုယ်ကျိုးရှာမရိုးသားမှုရဲ့ မျက်နှာဖုံးတွေ ရောကြိတ်မထားပါဘူးလို့ အာမခံလာမှ ငါလေးစားဖြစ်ပါ့မယ်။
တစ်ခါဖူးမှ မရူးဖူးခဲ့တဲ့ ဇာတ်ဝင်ခန်းမျိုးကို ကခုန်ပျော်ရွှင်ဖို့ ဘာကြောင့်များ မင်းစတင်ရွေးချယ်ခဲ့သလဲ ။ ဆင်ခြေဆင်လက်ဟာ လရောင် ပါလို့ပြောရအောင်တော့ မင်းဟာ ရေအိုင်ကလေး မဟုတ်ဘူးကွယ် ။ မင်းပြေးချင်တဲ့လမ်းမှာ လိပ်နေတဲ့ ခွာရာတွေကို သဲလွန်စ မရှာဘဲ ငါမြင်နေရတာက ကျိန်စာလား ။ တလွဲဆံပင်ကောင်းချင်တာနဲ့ပဲ ဝံသာနုစိတ်ကို ထည့်မတွက်တော့ဘူးတဲ့လား ။ ငါမှားတာက မှားတာပဲ ထားပါဦး ။ မင်းရဲ့မွေးဖွားလာခဲ့ခြင်းဟာ မိုးခါးရေသောက်ပြီး ပြဇာတ်ကရုံလောက်အတွက် မဟုတ်ဘူး ဆိုတာတော့ ငါယုံကြည်နေဦးမယ်။
ငါဟာ ဆုတောင်းခြင်း အလေ့အထကို ဘယ်တုန်းကမှ ဝါသနာမထုံခဲ့ဖူးပါဘူး ။ ဒါပေမဲ့ ဆုတောင်းရုံကလွဲလို့ ဘာတစ်ခုမှ မတတ်နိုင်တော့တဲ့ အခုလို အပေါစားရာသီမျိုးမှာ မင်းမြို့တော်က လရောင်ကြီး ရေခံမြေခံကောင်းပါစေလို့ ငါဆုတောင်းဖြစ်တယ်။ သန်းခေါင်ထက်ပိုနက်မယ့် ညဉ့်ကို ကျော်ဖြတ်တဲ့အခါ မင်းမြို့တော်မှာ မီးခိုးရောင် ညတစ်ည ဖြစ်မလာပါစေနဲ့ပေါ့ကွယ်။
မင်းပျံချင်သလိုသာ ပျော်ပျော်ကြီး ပျံသန်းပါ ။ ဒီလိုမျိုး တစ်ခါမှ မကြုံခဲ့ဖူးဘူးလို့ မင်းပြောဖူးတာပဲ မဟုတ်လား ။ ဒါဟာ မင်းရဲ့ မွေးရာပါ အခွင့်အရေးလည်း ဖြစ်ပါရဲ့လေ ။ မုန်တိုင်းတွေ ကြုံတဲ့အခါ မင်းအတောင်တွေ ပိုလိမ္မာပါးနပ်လာမှာပေါ့ ။ ဒါပေမယ့် …. ဥပဒေ စာအုပ်ထဲမှာ မပါတဲ့ သိမ်မွေ့နက်ရှိုင်းတဲ့ကျင့်ဝတ် တစ်ခုအပေါ် ဂရုမစိုက်သလိုတော့ မပျံသန်းနဲ့ပေါ့ကွယ်။ မင်းနင်းသွားတဲ့လမ်းမှာ တစ်ဖက်သားရဲ့ ဘဝကို ချမခင်းမိရင် ၊ မျိုးနွယ်တူတွေရဲ့ ပျော်ရွှင်မှုကို ဖြိုမချမိရင် ၊ မင်းလိပ်ပြာခုံရုံးကြီးမှာ အသန့်ရှင်းဆုံး
ဖြစ်တော့မပေါ့ ။ ဘယ်နည်းနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ် … မင်းဟာ ငါတွေ့ဖူးသမျှထဲမှာ အကောင်းဆုံးတစ်ယောက်ဆိုတဲ့အကြောင်း ငါလေးလေးနက်နက် ပြောပြချင်သေးတယ်။ ဒါပေမဲ့လေ… ရှေးရိုးစွဲ နည်းနည်းဆန်တဲ့ငါက မင်းရဲ့ခေတ်နဲ့အညီ ပြောင်းလဲမှုကို အသိခေါက်ခက် ၊ အဝင်နက်မိတယ် ။
ငါ့ကို အပြစ်တင်ပါ ၊ စိတ်ဆိုးပါ ၊ စိတ်ပျက်ပါ ၊ မေ့ပစ်ပါ ။ မင်းလျှောက်တဲ့လမ်းကို အားမပေးနိုင်ခဲ့တဲ့အတွက် အပြစ်ရှိတဲ့အကြောင်း သိပါရဲ့ကွယ် ။ ဆက်လျှောက်ပါ ၊ ပျော်ရွှင်ပါ ၊
အောင်မြင်ပါ ။ တစ်နေ့နေ့ တစ်ချိန်ချိန်မှာ ပုခုံးတစ်ဖက် ၊ နားရွက်တစ်စုံ လိုအပ်တဲ့အခါ ၊ မင်းမှာရှိတာနဲ့ မလုံလောက်ဘူးထင်တဲ့အခါ ၊ ငါ့ကိုခေါ်လိုက်ရင် ဖြစ်ပါရဲ့ကွယ် ။ တို့အားလုံးအတွက် ရိုးသားခြင်းဟာ ပထမဆိုရင် မင်းလုပ်သမျှ ရိုးသားမယ်ဆိုတာ ရဲရဲဝံ့ဝံ့ ငါအာမခံ နေမှာပေါ့ ။ ဘာကြောင့်ဆိုမင်းဟာ ( ဒီကိစ္စကလွဲရင် ) ဘယ်တော့မဆို ငါ့ဘက်က ရပ်တည်ခဲ့သူ၊ ငါ့အတွက် အကောင်းဆုံးသူ တစ်ယောက်လေ။
အောက်တိုဘာ ၂၃ ၊ ၂၀၁၂
ည ၂း၂၃ နာရီ
October 30, 2012 by Nyein Nyein Pyae	စိတ်ကူးထဲက စာစု	Leaveacomment
ငွေကြယ်တို့ စွန့်ခွာပစ်ပယ်ထားသော ကောင်းကင်ပြင်ကျယ်ကို သူက နက်ပြာရောင် ကင်းဗတ်စတစ်ချပ် အဖြစ် မြင်သည်။ ထိုအဆီးအတားမဲ့ ကင်းဗတ်စပေါ်တွင် ပုံရိပ်ပေါင်းများစွာ ကခုန်လာအောင် အတွေးလက်တံတို့ဖြင့် ရေးခြစ်ရသည်ကို သူပျော်သည်။ ည၏တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်မှုသည်ပင် သူ့ကိုယ်ပိုင်ပန်းချီကားချပ်၏ အသက်ဝင်မှုဖြစ်ပြန်၏။
ညသည် သူအကြိုက်ဆုံးစာအုပ်တစ်အုပ် ဆိုပါလျင် အတောမသတ်နိုင်သည့် နီလာရောင်ကောင်းကင်ပြင်ကျယ် ကြီးသည် သူသဘောကျရွေးချယ်မည့် ဇာတ်အိမ်တည်နေရာပင် ဖြစ်လိမ့်မည်။ သူရေးဖတ်ရမည့်ဇာတ်လမ်းမှ ဇာတ်ကောင်တို့အကြောင်းကို ပုံဖော်မိတိုင်း မျက်ဝန်းတစ်စုံကို ဖျပ်ခနဲသတိရတတ်သည်ကတော့ လူမသိသူမသိ ထုံးတမ်းစဉ်လာတစ်ရပ် ဖြစ်ခဲ့ပြီ။ မျက်ဝန်းကြည်ကြည်လေးတွေနှင့် ထိုတစ်စုံတစ်ယောက်သည် သူဘယ်တော့မှ ရေးခြယ်ပုံဖော်ဖြစ်မည်မဟုတ်သော ကောက်ကြောင်းမဲ့ပန်းချီကားသာ ဖြစ်ခဲ့သည်။ ထိုကြည်လင်နေသည့် မျက်နက်ဝန်းစိုစိုလေးများသည် သူဘယ်တော့မှ နှုတ်မြွတ်ဖွင့်ဟဖြစ်မည်မဟုတ်သော သူ၏ အသံမဲ့ဘာသာစကားသာ ဖြစ်ခဲ့သည်။
မြင်နေရသောကောင်းကင်၏ နက်ရှိုင်းလျှို့ဝှက်ခြင်းကဲ့သို့ပင် သူနှင့်ထိုမျက်ဝန်းကြား သံယောဇဉ်သည် ပွင့်လင်းမြင်သာစွာ နက်နက်နဲနဲ အမြစ်တွယ်ခဲ့ဖူး၏။ သိုသိုသိပ်သိပ်နိုင်သော ညတစ်ည၏ ဟာလာဟင်းလင်း ကောင်းကင်ကဲ့သို့ပင် ထိုမျက်ဝန်းတစ်စုံကို သူ ဗလာသက်သက် နင့်နင့်သီးသီး မြင်ယောင်လွမ်းမိပါသည်။
ငယ်ငယ်တုန်းဆီက ဘာမှန်းမသိ ကြောက်ခဲ့ဖူးသော အမှောင် နှင့် ညကို သူအခု သစ္စာရှိရှိ ချစ်တတ်ခဲ့ပြီ။ ညသည် သူ၏အကောင်းဆုံးသူငယ်ချင်းဖြစ်၍ အမှောင်သည် သူ့ကို နားလည်မှုအပေးနိုင်ဆုံးသော ရင်ဖွင့်ဖက်တစ်ယောက် ဖြစ်မှန်း သူသိရှိလာခဲ့သည်။ လက်ဆုပ်လက်ကိုင်ပြ၍ မရသော သူ့ဆီမှ ဝမ်းနည်းအထီးကျန်ခြင်းများစွာကို ညကောင်းကင်ကြီးက ဆွဲယူဖျောက်ဖျက်ပေးတတ်ခဲ့၏ ။ ည၏ကောင်းကင်မှ နေ၍ သူရှာဖွေတွေ့ရှိလာသော ပိုင်ဆိုင်မှုများက စကောတစ်ချပ်၏ ဇောက်ထက်တော့ အများကြီးပိုနက်ပါသည်။
မည်းမှောင်မှောင်ညကောင်းကင်တွင် သူ့ကိုယ်သူ ပြန်ရှာတွေ့ချိန်တိုင်းသည် ငယ်ဘဝ၏ လေပြေချိုအေးကို သူလင်းလင်းချင်းချင်း ပြန်ရှုရှိုက်ရချိန်များဖြစ်တတ်၏။ သမားရိုးကျ အတ္တတို့ဖြင့် နာဖျားပူလောင်နေတတ်သော နေ့ကာလများနှင့် သူ့ညသည် အမှန်တကယ်အားဖြင့် လားလားမျှ မတူတန်မှန်း သူသိလာခဲ့ပြီ။
ကလေးငယ်တစ်ယောက်၏ အပြစ်ကင်းမှုမျိုး၊ ဘာသာရေးကိုင်းရှိုင်းသူတစ်ယောက်၏ ယုံကြည်မှုမျိုး၊ လေ့လာဆန်းစစ်သူတစ်ယောက်၏ အတွေးအခေါ်မျိုးသည် ညတံခါးပေါက်မှတစ်ဆင့် သူ့နှလုံးသားအသိုက်အမြုံသို့ ချဉ်းနင်းဝင်ရောက်လာတတ်သည်မှာ အိမ်ဦးနှင့်ကြမ်းပြင်ပမာ တပြေးတည်းဖြစ်နေချေပြီ။ ထိုဧည့်သည့်လာလည်သော အခိုက်အတန့်တိုင်းသည် သူ့တကိုယ်စာ ဧည့်ခန်းနံရံတွင် သူ့ကိုယ်သူလိပ်ပြာသန့်မှု၊ ယုံကြည်မှု၊ လေးစားမှု ဆိုသော မှတ်ကျောက်ကို ချိတ်ဆွဲဂုဏ်ယူ နိုင်သည့် သီးသန့်ဆန်ဆန်အချိန်များဖြစ်လေ၏ ။
ထိုဧည့်သည်သည် သူ၏ကောင်းကင်ကင်းဗတ်စပေါ်မှ အရေးကြီးဆုံး ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးလည်းဖြစ်၏။
သူပျောက်ဆုံးနေသော အစိမ်းရောင်စုတ်တံတစ်ချောင်းကို ပြန်ရှာတွေ့သောနေ့တွင် ကင်းဗတ်စပေါ်ရေးရမည့် ပုံတစ်ခုရှိပါသေးသည်။ ကင်းဗတ်စ၏ အလယ်ဗဟိုတွင် စိမ်းစိုလန်းဆန်းသည့် ရွက်ပျိုတို့ အပြိုင်းအရိုင်း ဝေဆာနေမည့် အရိပ်ရနှစ်ချို့ပင်အိုကြီးတစ်ပင်ကိုဖြင့် မပါမဖြစ် ပါအောင်ထည့်ဆွဲမည်ဟု သူတေးမှတ်ထား၏။ ထိုသစ်ပင်ကြီးအောက်တွင်အေးအေးလူလူထိုင်ရင်း သူချစ်သောကောင်းကင်ကို မျက်ဝန်းကြည်ကြည်လေးများဖြင့် ငုံ့ကြည့်ချင်ပါသေးသည်။
စက်တင်ဘာ ၂၆ ၊ မနက် ၀၂း၂၀
October 19, 2012 by Nyein Nyein Pyae	အလွမ်း	Leaveacomment
ဗရံတာမှာ ၃ မိနစ်တာ
လက်ချိုးရေတွက်၍ပင်ရသော ကြယ်ပွင့်လေးတစ်ချို့သည် ကျွန်မမော့ငေးနေမိသော ကောင်းကင်ယံတွင် ခရေပန်းပွင့်လေးများနှယ် တွဲလဲချိပ်ဆွဲပွင့်လန်းနေကြ၏။
အဆုပ်လိုက်၊အခိုင်လိုက်မဟုတ်သော်ငြားလည်း မိုးရိပ်ကင်းသော ညတစ်ည၏အလှကို လောက်ငအောင်တော့ဖြင့် သူတို့ပွင့်လန်းတောက်ပနေကြရှာသည်။
ကြည့်ငေးနေဆဲမှာပင် တိမ်မျှင်စပါးပါးတို့က ကြယ်ပွင့်ကလေးများရှိနေသော ကောင်းကင်ပြင်ကျယ်ကြီးအတွက်
ကျိုးတို့ကျဲတဲနိုင်သော ကြယ်ပွင့်ကလေးတစ်ချို့ခမျာ ပျောက်ကွယ်သွားလိုက်၊ ပြန်ပေါ်လာလိုက် ။
ထိုအခိုက်အတန့်လေးမှာပင် ခပ်သဲ့သဲ့ တိုက်ခပ်လိုက်သည့် လေအနှော့၏ ကူညီမှုဖြင့် တိမ်မျှင်စတို့ ဘေးကပ်ပေးလိုက်ရ၏ ။
သာယာနေသော ကောင်းကင်သည် ကြယ်တစ်ချို့၏ အလင်းသဲ့သဲ့ဖြင့် တင့်တယ်လေပြီ။ တသုန်သုန်တိုက်ခတ်လာသည့် လေပြေချိုအေးသည်လည်း အေးမြကျီစယ်လေပြီ။
ကောင်းကင်ယံ၏ ဟိုမှာဘက်ခြမ်းထောင့်တွင် လွင့်ဝဲမျောပါနေသော တိမ်မျှင်စတို့သည်လည်း အလိုက်သင့်ချစ်စရာကောင်းနေရှာပြီ။
တိမ်တို့သည် ကြယ်ပွင့်လေးများ၏ပျော်ရွှင်မှုကို ဖုန်းလွှမ်းကြီးစိုးမှု မပြုပါစေနှင့်။ ။
စက်တင်ဘာ ၁၆ ၊ ၂၀၁၂
ဗရံတာမှာ ၃ မိနစ်တာ။
October 19, 2012 by Nyein Nyein Pyae	Inside Life	Leaveacomment
@ ငါ အိပ်မက် မက်တယ်
ရပ်တန့်သလို ၊ ပြေးလွှားသလိုနဲ့ ခြေစလှမ်း
ငါဟာ အကန်းတစ်ယောက်ဖြစ်သွားပါပေါ့လား ။
@ ဟိုနားကလား ၊ ဒီနားလား
ချနင်းတော့မယ့် နောက်ဆုံးမာနရဲ့ အမောတကောတားဆီးသံ
ပြန်လမ်းမလှမယ့်လမ်းချောက ခါးးးးးးးးးးး ………. တယ်
သစ္စာတရား ၊ အတ္တကင်းမှုနဲ့ စံနှုန်းတွေ ဒရွတ်ဆွဲလွင့်ပျယ်
ဘာလဲ ? ဘာဖြစ်လို့လဲ ?
@ ကျောခြင်းကပ်ထားတဲ့ မျက်နှာ
နှလုံးသားနဲ့ နမ်းရှိုက်လိုက်မိတယ် ။ ။
နံနက် ၀၂း၂၀ နာရီ
သြဂုတ် ၂၄ ၊ ၂၀၁၂
( အဖြူရောင်အတ္တတွေ ငါ့ဦးနှောက်ထဲကို ပြာလိုဖုံးလွှမ်းလာတဲ့ နေ့ ၊ ည ၊ ဘဝမှာ
ပက်ကြားအက်သွေ့ခြောက်လွန်းတဲ့ အထီးကျန်အိပ်မက်တစ်ခု ငါမက်တယ်။
ငါ အိပ်မက်ဆိုး မက်တယ်။ )
September 5, 2012 by Nyein Nyein Pyae	Inside Life	Leaveacomment
Somebody I met
*Picture from internet
Till now since I was born,so many people passed by. Many people said hi!bye along my life.
Some people walked into my life.Some people run through my life. Some people filled colors my life.
Without expecting,without inviting,without knocking,they penetrated my door and they had their seats in my life-room. They themselves made the roads towards me.
Some of them shared me smiles.Some of them treated me empathy . Some of them told me true stories.Some of them let me wake up with the feelings like my life is worth to living. Some of them gave me remembrance.Some of them showered me fondest kisses. Some of them made me cool.Some of them gave me the peaceful hugs. Some of them teased me sweet and warm. Some of them embraced me trustworthy.Some of them taught me the colorful knowledge . Some of them encouraged me confidence . Some of them empowered me success. Some of them hit me surprises.Some of them lifted me high.Some of them offered meahand. Some of them loved meaheap .
Some of them made me crazy.Some of them pushed me upset. Some of them beat me pressure. Some of them eyed me wrong.Some of them wanted me broken.Some of them fought me enough.Some of them gave me pains. Some of them frowned me queasy . Some of them defamed me with jealousy. Some of them kicked me to failure.
I don’t remember some of them . I don’t forget some of them . I don’t suspect some of them. I don’t trust some of them.
Well,it’salife we have to face.It’s meaningful but complex. I doubt that it’s useless. I believe that we should ignore some of them.
I recognize some of them for beingalong term relationship.But sometimes I don’t feel any serious for losing some of them.Sometimes I can’t help longing for some of them. Sometimes I get so so serious severe wounds for losing someone. I can never forget someone who passed away , who has justasingle day/month communication . For my whole life,I shall miss the one who met justawhile even though I neglect some of them who havealong time relation .
Nyein Nyein Pyae
I posted this post in here http://nyeinnyeinpyae.blog.com/
September 5, 2012 by Nyein Nyein Pyae	Random words	Leaveacomment
နောက်ပြောင်ကျီစယ်တတ်သော နတ်သူငယ်တို့သည် ကျွန်မ၏နိုင်ငံတွင်းသို့ စစ်မက်ကျူးကျော်လာကြကုန်၏။ သိမ်းပိုက်နယ်ချဲ့ခြင်းငှာမဟုတ် ၊ ရယ်မောပျော်ရွှင်ခြင်းငှာမဟုတ် ။ ကျွန်မ မေ့မေ့လျော့လျော့ သော့ခတ်သိမ်းဆည်းထားခဲ့သော အခန်းငယ်အား တံခါးလာခေါက်ရုံသက်သက်သာ ဖြစ်လေသည်။
ရိုးစင်းသာယာသော နံနက်ခင်း၏ ကောင်းချီးမဂံလာကဲ့သို့ပင် သူ၏မျက်လုံးကြည်ကြည်လေးများသည် နူးညံ့ကြည်လင်လျက်။ ပျိုမြစ်လတ်ဆတ်သော သစ်ရွက်လေးများ၏ လှုပ်ခတ်သံကဲ့သို့ပင် သူ၏အပြုံးများသည် နုသစ်ဝေဖြာလျက်။ ကျွန်မသည် နွေဦးရွက်ကြွေတို့၏ တည်ငြိမ်ရင့်ကျက်မှုကို ဆင်မြန်းထားသည့် ဗာဒံပင်ရိပ်ကဲ့သို့ပင်
နိုးထလာသည့် နှလုံးအိမ်မှ ခြေသံဖွဖွကို အရှက်သည်းစွာ နားဆင်လျက်။
သူဖန်ဆင်းသော ကြယ်တာရာတို့သည် ကျွန်မကိုယ်ပိုင် မီးအိမ်ငယ်လေးနှင့်အတူ လက်တွဲတောက်ပနေကြသည်။သူ၏ စိုက်ခင်းထဲမှ တောင်ပေါ်ထင်းရှူးပင်များသည် ကျွန်မ၏ကမ်းခြေမှ ပင်လယ်ကဗွီးပင်များနှင့် အသွေးတူအမွေးတူစွာဖြင့် မိုးကောင်ကင်အိပ်မက်များကို ဖွေရှာနေကြသည်။
မေ ၆ ရက် ၊ ၂၀၁၁ ။
၂၀၁၁ ခုနှစ်ကရေးထားတာ ပေါတောတောနိုင်တယ်။ ;P
September 5, 2012 by Nyein Nyein Pyae	မိုးရာသီ, အလွမ်း	Leaveacomment